» ‘‘हरेक दिन जिउँदो लास जस्तै बन्थे, दिनमा २५ जना सम्म यौन सम्पर्क गर्न बाध्य पारिन्थ्यो’’
‘‘हरेक दिन जिउँदो लास जस्तै बन्थे, दिनमा २५ जना सम्म यौन सम्पर्क गर्न बाध्य पारिन्थ्यो’’
१७ भाद्र २०७६, मंगलवार ०६:५९
हेटौंडा । मकवानपुकी एक जना महिला भारतिय कोठीमा १५ वर्ष र व्यक्तिको घरमा ५ वर्ष यौन दासीका रुपमा वस्न बाध्य बनाइदाको अवस्थामा भोग्नुपरेका समस्या कुराकानीमा आधारित ।
मकवानपुरको विकट ठाउँमा जन्मिए । अहिले ४६ वर्षको भएँ । आज भन्दा करिव २५ वर्ष अगाडी मलाई धेरै कुरा जानकारी निकै कम थियो । मैले १७ बर्षको नै उमेरमा आमा बुवाको मञ्जुरीमा नुवाकोटको केटा संग मागी विवाह गरे । खासै पढ्न पनि पाइन । अरु कुरा पनि थाहा थिएन । श्रीमान खेतीपातीको काम गर्नुहुन्थ्यो । माइतीमा पनि खेतीपातीको नै काम गर्ने भएकोले म पनि श्रीमान संगै खेती पातीको काम गरेर जिवन यापन गर्दै आएकी थिएँ ।
छोरा जन्मीएपछी श्रीमान बेपत्ता
विवाह गरेको तिन बर्ष पछि मेरो छोराको जन्म भयो । छोरा जन्मेपछि मेरो श्रीमान छोरा र मलाई छोडेर बेपत्ता हुन भयो । म सुत्केरी त्यसमाथी नुवाकोट जस्तो ठाउँमा जसोतसो श्रीमानको बुढी हजुरआमाकोमा बसें । त्यती बेलाको पीडा सम्झदा अहिले पनि निकै चिन्ता लाग्छ । तर, छ महिना सम्म श्रीमानको पर्खाइमा बाटो हेरेर बसे । तैपनि उहाँ आउनु भएन ।
श्रीमान नआउनु भएको हुदा म छ महिनाको छोरा च्यापेर माइती आएर बस्न थाले । माइतीमा नै आएर बस्दा पनि श्रीमान एक दिन अवश्य आउनु हुन्छ भन्ने झिनो आशा चाही मनमा थियो । तर, विडम्बना वहाँको केही पनि सुचना आएन । माइतीमा नै मेलापात गर्र्र्दै छोरा हुर्काउदै बसेको डेढ बर्ष पछि २०४८ साल असोज महिनामा मेरो आफ्नै गाउँको राम बहादुरले म तिमीलाई विवाह गर्छु तिम्रो छोरालाई म आफ्नै छोरा सरह गर्छु भन्ने आस्वासन दिनुभयो । उहाँले पटक पटक फकाएपछि मलाई पनि ठिकै लाग्यो र माइती घरको आर्थिक अवस्थामा पनि कमजोर भएको कारण म दोस्रो विवाह गर्न बाध्य भएँ ।
दोस्रो बिवाह गरेका श्रीमान संग हेटौंडा घुम्न आएपछी ……………
विवाह गरेको केही समय पछि मेरो श्रीमानले मलाई हेटौंडा घुम्न जाउ भनेपछि म छोरालाई माइती घरमै छोडेर श्रीमानसंग हेटौंडा आएँ । हेटौंडा आएपछि मेरो श्रीमानको नातामा मितिनी दिदीकोे घरमा राखेर मेरो श्रीमान कता जानुभयो थाह भएन । मितिनी दिदीको घरमा केही समय बसीयो । केहीदिनपछी मलाई मितिनी दिदी र एक जना अर्को पुरुषले फिल्म हेर्न जाउ भनेपछि म पनि तिनीहरुकै साथ लागेर फिल्म हेर्नको लागी गएँ ।
दुईलाखमा बिक्री गरेर भारत लगे
मलाई बाटोमा चिसो खान दिएको याद छ त्यस पछि के भयो मलाई थाह भएन । म होसमा आउँदा मैले आफुलाई रेलको डिब्बामा पाएँ । मैले म संगै भएका मितिनी दिदी अर्को दाईलाई सोध्दा म कहाँ आएको हो मेरो श्रीमान खै भन्दा उनीहरुले तिमीलाई तिम्रो श्रीमानले २ लाखमा बेचेर गयो भने पछि म छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ । उनीहरुले मलाई भारतको बम्बइको कोठीमा लगेर २ लाखमा मलाई विक्री गरेपछि उनीहरु खै कता गएँ । मलाई थाह भएन ।
भारतिय कोठीका १५ वर्ष
म बम्बइको कोठीमा १५ बर्ष बसे त्यो १५ बर्ष मैले कसरी विताएँ, अहिले सम्झदा पनि कहाली लागेर आउँछ । मलाई ज्वरो आउदा मेरो गाउँघरमा मेडिकलको ओषधी नभए पनि हाम्रै गाउँघरमा पाउने जडिबुटी दिएर निको पाथ्र्यो । तर मलाई कोठीमा ज्वरो आयो भन्दा मलाई नाटक गरिस् भनेर कोर्रा लगाउथ्यो । मलाई मनदेखि पिडा हुन्थ्यो आखाँबाट अनायासै आसु झथ्र्यो । तर, आसुमा मलम लगाउने कोही हुदैन थियो ।
नक्कल गरेको भनेर चुरोटको ठुटोले मेरो हातै भरि पोलीदिन्थ्यो । म रुन्थे कराउथे तर, मेरो आवाज सुन्ने कोही पनि हुँदैन थ्यो । नराम्रो काम गर्दिन भन्दा त्यहाँ मेरो चित्कार सुन्ने कोही पनि हुदैन्थ्यो । म भाग्न खोज्थे तर, कहाँ भाग्नु म एउटा विकट गाउँमा जन्मेको त्यो भारतको विशाल सहरको बारेमा मलाई के थाह ? दिक्क लागेर भाग्न खोज्दा चार दिवार बाहेक केही हुदैन्थ्यो । मेरो भाग्य नै यस्तो भनेर बाध्य भएर अरुको सन्तुष्टीको लागी जिउदो लास भइदिन्थे । अनि मेरो शरीरमा आएर मलाई चिथोरेर निचोरेर जान्थे । म विवश भएर सवै कुरा सहन्थे । यसरी नै १५ बर्ष वित्यो बम्बइको कोठीमा ।
कोठीमा वस्दा दीनमा २५ जना सम्म शारिरीक सम्पर्क गर्न बाध्य बनाईयो
यती धेरै सहएँकी हरेक दिन २५ जना सम्म शारिरीक सम्पर्क गर्नुपथ्यो । जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि दैनिक कम्तिामा १२ जना बढिमा २५ जना संग शारिरीक सम्पर्क गर्नुपर्दा धेरै पीडा बोध हुन्थ्यो । जती पीडा भएपनि सुन्ने कोही हुादैनथे । केवल पीडा, आक्रोस, चित्कार पल, पर्खाल, आढ्ने ओच्याउनेलाई मात्र सुनाउन बिवस हुन्थे । कहिले काही त आत्महत्या गरौं जस्तो पनि हुन्थ्यो । तर, छोराको याद र सम्झनाले गर्दा कुनै दिन छोरालाई भेट्छु जस्तो लाग्थ्यो ।
कोठीबाट निकालीयो तर, व्यक्तिको घरमा यौन दासी बनाईयो
एक दिन म बसेको कोठीमा एक जना गुजरात तिर घर बताउने मारवाडी आईरहन्थ्यो र मलाई माया गरेको जस्तो गरेर कोठी मालिक्नीसंग कुरा गरेर म संग विवाह गर्छु भनि किनेर मलाई गुजरातमा उस्को घरमा लग्यो । म पनि विश्वास गरेर उसको साथ लागेर गुजरात गए । तर, उसको घर पुगेपछि बल्ल थाह भयो । उसको श्रीमती छोरा छोरी समेत रहेछ ।
मलाई विवाह गरेर होइन मलाई यौन दासी बनाउनको लागी रहेछ । त्यो मारवाडी यति दुष्ट थियो की जुन सुकै समयमा पनि उसको लागी म यौन दासीको रुपमा तयार हुनपथ्र्यो । तर, पनि एक किसिमले ठिक्क पनि थियो । मेरो लागी किन भने मारवाडीको घरमा मारमाडी मात्र हुन्थ्यो भने कोठीमा कैयौं मानिसहरु ।
यौनदासीका रुपमा वस्दा छोरा संगको भेट
म त्यहाँबाट भागेर पनि आउन सक्दिनथे । म चुपचाप गुमनाम जस्तै भएर आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडी बढाउदैं थिएँ । मेरो जिवन यात्रा फिल्म जस्तै छ । जव म बेचिएँ मेरो छोरालाई पनि मामाघरमा बस्न मन नलागेर उ पनि विरगंज, रक्सौल, गोरखपुर हुदै गुजरातमा एक जना भारितय मानिसको घरमा काम गर्न बसेको रहेछ । त्यहाँ कामको साथ साथै विद्यालय पनि भर्ना गरिदिएको रहेछ । यसै विचमा गुजराती साथीसंग सधै आफ्नो छोराको बारेमा कुरा गरिरहन्थे ।
एक दिन त्यहि साथीले मेरो छिमेकीमा एक जना छ उ पनि नेपालको भन्छ, तिमील चिन्छौं भनेर सोध्दा मलाई थाह थियो मेरो छोराको खुट्टमा घाउँ दाग थियो । मलाई त्यो केटा संग भेट गराएपछि मैले सवै कुरा सोध्दा मेरो माइती घरको बारेमा बतायो र खुट्टामा घाउको दाग पनि थियो । मैले म नै तिम्रो आमा हुँ भनेपछि हामी आमा छोरा धेरै बेर अंगालो हालेर रौयौं । अनि मैले मारवाडीलाई भनेर मेरो छोरा पनि मसंगै राखे । मेरो छोराले पढाईलाई निरन्तरता दिएर भारतमा नै कक्षा १२ पास गर्यो ।
छोराको अगाडी पनि मलाइै यौन शोषण गथ्र्यो
म मारवाडीको घरमा ५ बर्ष यौन दासीको रुपमा बसे । त्यस्ले मलाई यति धेरै पिडा दिन्थ्यो की मेरो छोराको अगाडी पनि मलाइै यौन शोषण गथ्र्यो । मेरो छोराले सहन नसकी मारवाडी संग झगडा पनि गरयो । हामी त्यहाँबाट भागेर सालमा नेपाल आयौं । आफ्नो जाने ठाउँ कतै पनि थिएन । माइती गएँ माइती मा त सहजै अपनायो । तर गाउँलेले बम्बई बाट आएको विदेशमा रही बेश्यावृत्ति गरेको भनि समाजमा पटक पटक अपहेलित हुदा पनि जाने ठाउँ कतै नभएर विभिन्न लान्छना सहदै जिवन व्यति त गर्दै आएँ ।
बिक्री गर्नेलाई मुद्धा हालेर २० वर्ष जेल हाले
म गाउँमा हुदा एउटा गैर सरकारी संस्थाले मानव बेचविखन तथा ओसार पसार विरुद्धको कार्यक्रममा भाग लिने मौका पाएँ । त्यो कार्यक्रमा जति पनि कुरा थाह पाएँ मेरो जिवन संग मिल्दो जुल्दो धेरैको समस्या पाएँ । कार्यक्रम सकिएको भोलीपल्ट मैले मेरै अलि टाढाको छिमेकी बहिनीसंग कुरा गरेपछि दिदी यस्ता मान्छेलाई त्यत्तिकै छाड्नु हुन्न सजाय दिनुपर्छ भनेर भनेपछि म त्यहि बहिनीको साथमा एउटा गैर सरकारी संस्था मार्फत मिति २०६९ साल असार २७ गते मलाई विक्री गर्ने तिन जनाको विरुद्धमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार अन्र्तगत मुद्धा दर्ता भयो ।
मुद्धा दर्ता गर्न साथ मेरो नाम मात्रको श्रीमानलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । यता मितिनि दिदीको मृत्यु भएको थियो भने अर्को हाल नेपालमा नरहेको भन्ने थाह हुन आयो । मेरो श्रीमान पक्राउ परेपछि मलाई एक किसिमको आनन्द आयो । मुद्धा चल्दै थियो म र मेरो छोरा माइती गाउँमा बस्दै ज्यालापानी गर्ने, कहिले काफल टिपेर बेच्दै आफ्नो गुजारा गर्दै आएका थियौं । २०७० साल जेष्ठ ७ गते मेरो मुद्धाको अन्तिम फैसला भयो । मलाई बेच्ने मेरो श्रीमानलाई २० बर्ष कैद र दुई लाख जरिवानाको फैसला सुनाईयो । मलाई राज्यको जिल्ला पुर्नस्थापना कोषबाट क्षतिपुर्ति बापत तीन लाख भराई दिने भनेर फैसला भयो ।
म त्यो दिन सवै भन्दा खुशी भएको दोस्रो दिन थियो भने पहिलो दिन म आमा बन्दा । २० बर्ष कैदले म २० बर्ष नारकिय जिवन व्यतित गरेको समयको केही भरपाई भयो । मुद्धा त फैसला भयो म अनपढलाई केही थाहा मुद्धा पनि तह तह हुन्छ भनेर फैसला त भयो तर क्षतिपुर्तिको रकम अहिले सम्म पाएकी छइन । म पटक पटक बुझ्न नआएकी पनि होइन । तर, कहिले के कहिले हैरान भएँ । कहिले आएको रकम पनि फिर्ता गयो भन्ने । अहिले सम्म म त्यही रकमको पर्खाइमा छु ।
म र मेरो छोराको नागरिकता बनाउन धेरै हैरान खेप्दैछु
मेरो आफ्नो नागरिकता छैन । मैले बनाउने प्रयास नगरेको पनि होइन । तर, म विवाह गरेर गएको मान्छे उतैबाट बनाउनु भन्छन् । बिवाह गरेको हातल यस्तो छ । आज भन्दा करिव ३० बर्ष अगाडी नुवाकोटबाट मेरो श्रीमान बेपत्ता हुनु भएको वहाँको आफन्त कोही पनि छैन म कसरी जानु ? एक चोटी चाही मलाई बेच्ने श्रीमानबाट पनि नागरिकता बनाउनको लागी सुझाव दिनुभएको थियो । तर, मलाई २० बर्ष नारकिय जिवन विताउन बाध्य बनाउने पशुको नाम जोडिरहन मन लागेन ।
म मकवानपुरमा जन्मेको मेरो बुवाको नागरिकता छ । मेरो छैन म कहाँको नागरिक हुँ म । २० बर्ष सम्म भारतमा बसे म भारतको नागरिक त भइन । मेरो घर नेपाल तर, म नेपाली हुँ भन्ने पहिचान नै छैन । मेरो जसोतसो उमेर आधा भइसक्यो । तर, मेरो छोराको के दोष ? उ पनि पहिचान विनाको जिन्दगी बिताउने ?
मेरो छोराले १२ पास गरेको छ । तर, उसको नागरिता नभएर पढेर पनि जागिर पाएको छैन । उसले पछि विवाह गरेपछि पनि उसको सन्तान पनि अनागरिक हुन्छ ? विडम्बना २०७२ सालको भुकम्प आउनु भन्दा अगाडी उ मलाई एक्लै छाडेर काठमाण्डौं गएको छ । मैले कति खोजे तर उ सम्पर्कमा नै आएको छैन । म हाल ज्यालापानी गरेर आफ्नो जिवन यापन गर्र्र्द आएकी छु । नेपाली भएर पनि पहिचान विनाको नागरिक भएर वसेको छु । म जस्ता हजारौं चेलीहरु बेचविखनको चपेटामा परेका छन् उनीहरुको समस्याको समाधान त सहिजै हुनुपर्ने होइन ?
(माईती नेपाल मकवानपुरकी संयोजक तथा मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्ध संजालको सह–संयोजक माया लामा संग पीडित महिलाले गरेको कुराकानीमा आधारित । बेचिएकी महिलाको नाम र ठेगाना गोप्य राखिएको छ ।)